छतमा कपाल सुकाइरहेकी थिइन् यि किशोरी, अचानक उनको जीवनमा आयो यो यस्तो आ,पत ?
कहिले काँही जीवनमा नसोचेको घ,टना हुन्छ । एक १५ वर्षकी किशोरीको जीवनमा पनि त्यस्तै घ,टना भएको छ । भारत महाराष्ट्रको पुणेमा शुक्रवार पेठमा एक १५ वर्षीया किशोरी भवनको छतमा कपाल सुकाउ लागेकी थिइन् । तर अचानक उनी चिप्लिइन् । तर उनको भाग्य बलियो रहेछ । भवनको चौथो तलाको झ्यालमा अ ड् किएन् ।किशोरी झ्यालको ढोकामा केहि सेन्टीमिटरको चौडाइमा उचिएकी थिइन् । **थप भिडियो यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्**,
यो सबै देखेर भवनमो तल जम्मा भएका मानिसहरु र डराए । उनलाई बचाउन सबै दौडिए ।भवनमा उपस्थित मानिसहरुले छतबाट साडी खसाले र युवतीलाई माथि उठाउन खोजे, तर केटी डरले साडी समात्न सकेनन्। त्यसपछि युवतीको उद्धारका लागि दमकल बोलाइएको थियो। अ ग्नि नियन्त्रकहरूले सबैभन्दा पहिले त्यो ठाउँमा पुग्न कोसिस गरे जहाँ युवती सीढीको सहयोगमा फ से की थिइन्।
तर सीढी चौथो तलाको झ्यालमा पुग्न सकेन। त्यसपछि दुई अग्नि नियन्त्रक सचिन माण्डवकर र कैलास पायगुडे पाँच तले भवनको छतमा गए र उनीहरुको कम्मरमा रस्सी बाँ धे र चौथो तलामा ओर्लिए।त्यसपछि दुवैले केटीको कम्मरमा डोरी बाँ धे र सुरक्षित रुपमा सीढीहरु बाट तल लैजाने। यसरी पुणे फा य र ब्रिगेडले चौथो तलामा फ से की युवतीलाई बचायो। अग्नि नियन्त्रकहरुको यो साहसलाई सबैले सलाम गरिरहेका छन्। दुबै अ ग्नि नियन्त्रकले ती बालिकाको ज्यान बचाए।**थप भिडियो यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्**,
Previous छतमा कपाल सुकाइरहेकी थिइन् यि किशोरी, अचानक उनको जीवनमा आयो यो कस्तो आ,पत ?
Next काठमाडौं जादै गरेको बस दु’र्घट’ना, तीनको मृ’त्यु